Tag: arụmọrụ ọdịnaya ahịa
Mkpa ọ dị ire ahịa
Mọnde, Febụwarị 24, 2020 Mọnde, Febụwarị 24, 2020 Carson Conant
Ọ bụ ezie na teknụzụ na-enye aka na-egosi na ị na-abawanye ego site na 66%, 93% nke ụlọ ọrụ enwebeghị ike itinye usoro ntinye azụmaahịa. Nke a na - abụkarị n'ihi akụkọ ifo nke nkwado ahịa na - adị oke ọnụ, dị mgbagwoju anya ma tinye ya ma nwee ọnụego nnabata. Tupu ịbanye na uru nke ikpo okwu inyeaka na ihe ọ na - eme, ka anyị buru ụzọ banye ihe nkwado ahịa bụ yana ihe kpatara o ji dị mkpa. Gịnị Bụ Ahịa Kwadoro? Dị ka Forrester Consulting si kwuo,